Alabada ku uruursan dakadaha ayaa loo ogolaaday in ay iskood uga qaadan shaqsiyaadka – ዜና ከምንጩ
Alaabada ku uruursan dakadaha ayaa la sheegay si loo qaado in ugu yaraan loo baahan yahay in kabadan 13 kun oo kontenaro ah
Xafiiska gaadidka iyo adeega dakhliga ayaa sheegay in ay jirto yarida kontenarada,sidaas darteedna dakadaha kala duwan ee shiinah ku yaala iyo kirada marakiibta oo koradhay awgeed in loo rukhseeyay hantiilayaashi alabadaasi laha in ay ka raraan alabadooda.
Sababta ugu wayn ee keentay yarida koontenarada ayaa ah alaabada shiinaha looga raraayo maraykanka iyo wuqooyiga yurub oo aad u soo badanaysa.dhinaca kalena cudurka covid 19 ee caalamka ka dilaacay awgeed ayaa ah sababta labaad, sida u ugu waramay wargayska addis maleda madaxa hayada xidhiidhka gaadiidka bada iyo loogestiga mudane Ashebir Noota.
Waxa u intaasi raaciyay koontenarada madhan oo aad u yaaraady awgeed ayaa caqabad ay ku noqotqy ganacsiga dalkeena la soo galinaayo iyo laga saaraayo, ka sasokow dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee caalamka si dadban iyo si toos ahba waxa ay ku abuurtay culays.
Ashabir oo sheegay dhibatada kale halkjaasi ka jirtan in ay tahay ayada oo lagu jiro xili roobaad xiligaanina u yahay xiliga caalamka dhaqdhaqaaqa ganacsigu u aad u badanyahay in taasina ay dhibkeeda leedahay ayaa waxa ay dhibaatada sii kordhisay afar iyo shan jibaar.
Hadaba dhibaatooyinkaasi kor lagu xusay iyo sababo kale oo la xidhiida ayaa xiligii loogu talo galay in ay dalka soo galaan ka dhigay in dib ay uga dhacaan,taasina waxa ay sababtay bu yidhi masuulku in ay ku uruuraan dakadaha shiinaha.
Waxa u intaasi raaciyay badeecadahaasi oo ka soo gala dakadaha shiinaha aan meelaha kale loo fiirsan in ay jiraan dhibaatooyin kale.
Hantiilayaasha etobiyana in si toos ah iyo si dadbanba ay cabashadooda usoo gudbinayeen xafiiska ayuu sheegay.
Waxa la sheegay si looga hor tago khasaaraha ku iman kara hantilayaasha badeecadaha dhoofiya iyo kuwa soo galiyaba in loo ogolaaday in badeecadohooda ay ka rartaan dakadaha ayaa loo rukhseeyaay.
Waxa kale oo u sheegay ogolaanshahani waxa loogu baahday, hadii ay hayadu awoodi waydo in laqaado badeecadahan si hantiilayaashu ay u awoodaan in ay kiraaystaan maraakiibta iyo konteenaradaba oo ay badeecadahooda ka rartaan halkaasi.
Sidaas awgeedna bu yidhi masuulku ogolaanshaha ay ka heleen xafiiska iyaga oo kaashanaya macaamishu in ay ku hawlanyihiin qaadiista badeecadohooda oo ay ka rarayaan dakadaha.
Dhinaca kalena xafiisku waxa u sheegay in xalkan u usoo ban dhigay dhibaatooyinkan in hor mudka la siiyay qaar ka mid ah badeecooyinkaasi iyo sida ay u kala hoeeyaan oo loo guro alaabadan.
Tusale ahaan waxa la sheegay sida badeecadaha aan ku raagi Karin dakadaha sida daawooyinka,cuntooyinka,waxyaabaha cuntooyinka la xidhiidha iyo kuwa xumaan kara in la hor mariyo.
Masuulku waxa u sheegay oo kale si dhibaatadaasi loo xaliyo in xafiisku u ku hawlanyahay sidii konteenarada u haysto oo dhan halkaasi loogu diraayo meesha ay badeecaduhu ku uruursanyihin oo la geeynaayo.
Waxa u intaasi raaciyay in sida ugu dhakhsaha badan dakadaha shiinaha la geeynaayo maraakiibta shirkadu ay haysato iyo kuwo la kiraaystayba
Ayada oo la xoojinaayo hawshan ayuu yidhi in badeecadaha hadhsanna ilaa bisha nahaase kala badhkeeda ee sanadka 2013ka sidii looga wada guri laha lagu hawlanyahay.
Warku waxa kale oo u sheegaya in hayada oo caqabadaha ay la kulantay ee caalamiga ah ka gudubtay, ayaa hadana xisaab xidhka sanadkan qorshihi u qorshaysna in halkaasi laga qaado 170 kun ee kontenaro ah ay ku guulaysatay in ay qaadaan 150 kun oo konteenaro ah.
Sida u cadeeyay mudane Ashabir qorshihi sanadka loogu talao galay ee ahaa in la qaado badeecadaha halkaasi ku uruuray oo ay caqabad ku noqotay sababihi aan kor ku soo xusnay awgeed,sidoo kale hadana xili guga loo baahan yahay in sida ugu dhakhsaha badan halkaaasi looga soo daad gureeyo oo dhamaadka bisha nahaase la dhamays tiro oo shaqadi caadiga ahayd la gali doono.
Ugu danbayntii sida u cadeeyay masuulku,in kasta oo ay jireen caqabadoo caalami ah,hadana hayadu ayada oo awoodeeda isticmaalaysa oo kaashatay wakiilo kale oo maraakibta ah in adeegi loo baahna ay u fidisay macamiisha si joogto ah.sidaas darteedna ay ku mu muujiyeen dadaal xoogan, ayaga oon adeega iyo dakhliga dalkba wax u dhimin.
Total views : 5876223